Indawo yoLondolozo lweMidlalo (i-GAW) yoVimba
Udidi: Iworkshop yeMidlalo (GAW)
Thenga iworkshop yoMdlalo ngaphambi kweHlabathi yeFantshini eHit TV
10 Agasti 2021 | Ukuhlaziywa: 10 Agasti 2021
Imidlalo yokusebenzela (i-GAW) ngukumkani we-wargaming. Kulawo angaziyo, le yeyona ndlela yayo inyulu- ixesha lokuzonwabisa apho abadibanisi badibana khona ukuze bajoyine umlo kwimidlalo yebhodi yebhola yehlabathi emnandi kunye nemifanekiso yesinyithi. Izandi ziyinto entle kodwa lishishini elikhulu.
Iifayile kunye nezinye iimodeli zipeyintwe, ziqokelelwe kwaye zidlalwe ngeyona ndawo idumileyo njengenxalenye yeWarhammer franchise.
Kujikeleze umdlalo odlala imfazwe yinkqubo yendalo yokupapasha, ngaphandle kweintanethi nakwi-Intanethi, kunye ne-franchise spin-offs yemidlalo yevidiyo, amakhadi njlnjl., Njengoko siza kubona, uthotho lweTV.
Iworkshop yeMidlalo ithengisa iimveliso zayo kwihlabathi liphela, kunye ne-US ngoku yeyona ntengiso yayo iphambili, ilandelwa yi-UK, iYurophu kunye neAsia. Iipesenti ezingamashumi asixhenxe zeentengiso ngoku zivela ngaphandle kwe-UK.
Le ibeyimpumelelo yeshishini lakutshanje kangangokuba kule minyaka imbalwa idlulileyo iye yaba sisithandwa sentengiso yemasheya yase-UK, ingomnye wabadlali bayo ababalaseleyo.
Ukusebenza kwayo okuthandekayo kusekwe kumandla ayo okusebenzisa ixesha lokuzonwabisa ngendlela eyenze ukuba ikwazi ukwenza imali ngesiseko ngelixa ityhalela abaphulaphuli ababanzi- into enxulunyaniswa kakhulu nokuhlala komlawuli oyintloko uKevin Rountree. URountree wajoyina inkampani ngoJanuwari 2015.
Umzi mveliso ukugcina ukuseta nkqo kunceda umgca osezantsi
Kunye nokulawula ukuhanjiswa kunye nokuthengiswa kwezinto ezincinci, iMidlalo yokuSebenza nayo iyazenza. Iyazithengisa ngokujolisa kubathengisi abazimeleyo, nangona ingabekelwa bucala imixokelelwane emikhulu, kwaye nangengalo yayo yokupapasha iThala leeNcwadi eliMnyama.
Ngokudumileyo, inentambo yayo yeevenkile zentengiso, amaziko abatyeleli kunye nomnyhadala wokubonisa umhlaba, singasathethi ke ngejelo loku-odola iposi, eliyeyona nto iphambili kunikezelo lwayo lwedijithali olubandakanya isitolo salo sewebhu.
Inyaniso yokuba ishishini liqhubekile nokusebenza kakuhle ngexesha lokutshixwa kwamaxesha akutshanje bubungqina bokwenziwa kwepivot yalo kwidijithali.
Icandelo leMveliso kunye noNikezelo lwe-GAW kulapho imali evela kwiminerals kunye nezinye iimodeli zentengiso zixeliwe. Imveliso yenzeka kwisixeko saseNgilandi i-Nottingham, hayi e-China njengoko abanye becinge njalo, nangona uninzi lopapasho lwayo olukhulu luvela e-China.
Kwiingxelo zayo zezemali i-GAW ibandakanya iiprojekthi ezinobuchule kunye neentlawulo zeroyalities ezivela kubanini bamaphepha-mvume kwicandelo leziko lenkonzo.
Imidlalo yeworkshop itshathi ye-10 ka-Agasti 2021, ngoncedo lwe-SharePad
Iworkshop yemidlalo isitokhwe esibizayo
Ingxaki ephambili ngeGAW lixabiso lezabelo zalo. Ixabiso-to-book ratio ngu-19.7 kunye ne-free-free-flow flows ingama-32, ngelixa uqikelelo lwamaxabiso ukuya kumvuzo ngama-30. Ixabiso lesabelo livaliwe namhlanje nge-11,904, XNUMXp.
Nangona kunjalo, kula maxabiso utyalomali ufumana inkampani enexabiso eliphakamileyo njengembuyekezo, ngokuqinisekileyo ebeka imali ukuba isebenze ngendlela efanelekileyo.
Ukubuyela kwi-capital yi-64%, ukuyibeka kwindawo ye-25th kwiinkampani ze-1,793 kwimakethi yase-UK nase-Ireland, ngokweStockopedia. Ukubuyela kwi-equity-equity 76.9% kwaye inamagama okusebenza angama-42.9% ngo-2021 xa kuthelekiswa neminyaka emihlanu ye-30%.
Ukukhula kwe-EPS kungene nge-70% emangalisayo kwi-374p. Ukukhula kokugqibela okukhawulezayo okunje ngo-2017 no-2018, okuhambelana nemihla yokukhutshwa kweenguqulelo zamvanje zepropathi ekhokelayo IWarhammer 40,000 (omnye umdlalo ophambili ngowokuba Iminyaka ye-Warhammer ye-Sigmar kwaye Ubungqina beWarhammer). Ngenxa yoko ulindelo lokukhula kwe-EPS ngo-2022 ngowona uhamba ngeenyawo ngeepesenti ezi-2 kodwa oko bekuya kubonisa inzuzo enkulu ye-EPS engama-382p.
Ingeniso kunyaka ophela ngoMeyi yayiyi- $ 353 yezigidi xa kuthelekiswa ne- £ 269 yezigidi kunyaka ophelileyo.
Iworkshop yoMdlalo inenqanaba lokukhula konyaka elihlanganisiweyo lama-53.9% kwaye igcinile inqanaba le-EPS yesiqhelo, ke abatyali mali kufuneka bazithembe ukuba banokuqhubeka kwaye ngaloo ndlela bathethelele uxabiso lwangoku kwaye babonelele ngendawo yokukhula kwenkunzi.
Zimbini iindawo ekufanele ukuba zivuse umdla wabatyali mali, eyile imidlalo yevidiyo kunye noluhlu lweTV silukhankanyileyo ngaphambili.
Fumana okunye malunga urhwebo lwesitokhwe ngaphambi kokwenza urhwebo lwakho lokuqala ngokufunda isikhokelo sethu.
Okulandelayo Imidlalo yeTrone...
Iimidlalo yevidiyo Iirhafu zengeniso ziyakhula, nangona zilungelelaniswa neengeniso kodwa ngokukhutshwa kwemidlalo yeAAA ukukhawulezisa, kukho ithuba lokuba imidlalo inyathele ngaphaya kwabaphulaphuli ababalulekileyo ukuze babambe isuntswana lomdla woluntu ngokubanzi. Kukho imidlalo yevidiyo eli-15 ephantsi kophuhliso. Kwakhona, inkonzo entsha yokubhaliselwa kufuneka incede nakuloo nto, amaxabiso okhuphiswano nge- $ 4.99 ngenyanga kunye nokwazisa ngale nyanga.
Emva koko kukho ithemba lothotho lweTV olubizwa I-Eisenhorn Ukuphuma, kodwa inkampani ayibonelelanga ngolwazi oluninzi malunga nenkqubela phambili kule nqanaba. Ngokusekwe kwiincwadi zika-American Dan Abnett, u-Eisenhorn ulandela i-adventures ye-Inquisitor uGregor Eisenhorn kwaye wavela ngo-2001 kwi-Games Workshop ye-54 millimeter yemodeli yemidlalo ye-RPG, i-Inquisitor yakhululwa. U-Eisenhorn ngumlingiswa ogama lakhe kulo mdlalo kwaye unemodeli yakhe.
Mhlawumbi entsha Game of Thrones Kuninzi kakhulu ukubuza, kodwa amandla aqinisekisiweyo anomdla weedrama zehlabathi ngoku sele esungulwe kakuhle, ke ngoku ucinga ukuba uthotho ekugqibeleni luyakubona ukukhanya kwemini, kunokuba yinto enkulu yemali ejikelezayo kwiWatch Workshop.
Sivavanya iworkshop yokuthenga ngokuqinileyo.
Ungathenga i-Workshop yeMidlalo nge-0% yekhomishini kwiqonga lotyalo-mali le-eToro.
tags Iworkshop yeMidlalo (GAW)